Ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao: Baiboly Natao Hateza
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Catalan Chichewa Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galoà Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Oromo Ossète Poloney Portogey Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Valencienne Wallis Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Ny Baiboly no boky sarobidy indrindra amin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Ianaran’izy ireo foana izy io ary ampiasainy mba hampianarana ny hafa momba ny vaovao tsaran’ny Fanjakan’Andriamanitra. (Matio 24:14) Vetivety dia simba ny Baibolin’izy ireo, vokatr’izany. Nataon’ny Vavolombelona àry ny ezaka rehetra mba ho tsara tarehy sady hateza Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao, fanontana 2013.
Tokony ho mafy tsara ilay Baiboly vaovao. Nisy Vavolombelona vitsivitsy, solontenan’ny mpiasan’ny fanontam-pirinty any Wallkill, any Etazonia, niresaka tamin’ny talen’ny orinasa iray mpanakambana boky momba ny zavatra kasain’izy ireo hatao. Hoy ilay tale: “Tsy hahita Baiboly hoatr’izany mihitsy ianareo. Mampalahelo fa natao ho haingon-databatra na talantalana ny ankamaroan’ny Baiboly, fa tsy natao hateza.”
Tsy nateza firy ny Baiboly Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao sasany natonta voalohany. Nisy aza nisaratsaraka rehefa nafana be ny andro. Te hanamboatra Baiboly azo ampiasaina be amin’ny toetrandro isan-karazany ny mpiasan’ny fanontam-pirinty. Nanaovan’izy ireo fikarohana àry ireo akora fanamboarana fonona boky, lakaoly, ary ireo fomba fanakambanam-boky. Ny valim-pikarohany avy eo no nampiasain’izy ireo mba hanamboarana Baiboly andrana, izay nasaina nandraman’ny Vavolombelona mipetraka any amin’ny tany faran’izay mafana sy faran’izay mangatsiaka.
Naverina mba hodinihina ireo Baiboly rehefa afaka enim-bolana. Nanao fanatsarana avy eo ny mpiasan’ny fanontam-pirinty, ary nandefa Baiboly andrana hafa indray. Baiboly 1 697, tamin’ny fitambarany, no nanaovana fanandramana. Tsy fanahy iniana ny zavatra sasany nihatra tamin’ny Baiboly vitsivitsy. Tavela teo amin’ny orana nandritra ny alina manontolo, ohatra, ny iray ary ny iray difotry ny rano tamin’ny rivo-doza. Nahalalana zavatra be momba ny hamafin’ilay Baiboly ny vokatr’ireo andrana sy zavatra tsy nampoizina ireo.
Nividy milina fanakambanam-boky haingam-pandeha ho an’ny fanontam-pirintiny any Wallkill sy Japon ny Vavolombelona, tamin’ny 2011. Mbola teo am-panaovana an’ilay andrana izy ireo tamin’izay. Tsy ny hamokatra Baiboly ampy tsara ihany no tanjona, fa ny hanao pirinty Baiboly mitovy endrika koa any amin’ireo toerana roa ireo.
Niteraka olana ilay fonony miforitra
Nanomboka nanao pirinty an’ilay Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao efa nisy hatramin’izay, ireo fanaovam-pirinty roa teo am-piandohan’ny 2012. Mainty sy volontsôkôlà ny fonon’izy ireo ary vita tamin’ny polyuréthane vaovao (karazana plastika mora aforitra). Mbola tsy nanaovana fanandramana anefa ilay lakaoly sy karazana plastika nampiasain’ireo milina vaovao tamin’ny fonon’ireo Baiboly. Niforitra be àry ilay fonony rehefa napetaka tamin’ilay Baiboly. Nezahina novahana ilay olana, saingy tsy nahomby izany ka naato aloha ny famokarana.
Nilaza ny mpanamboatra ny iray amin’ireo akora fa fahita ny hoe lasa miforitra be ny fonon’ny boky iray rehefa malefaka, ary saro-bahana izany olana izany. Tsy nanova an’ilay izy ho fonony mafy anefa ny Vavolombelona, fa tapa-kevitra ny hamokatra Baiboly tsara endrika misy fonony malefaka. Nanao fanandramana nandritra ny efa-bolana izy ireo, tafiditra tamin’izany ny fampifangaroana karazana lakaoly sy plastika maromaro. Nety tsara ny fampifangaroana nataon’izy ireo, tamin’ny farany, ka afaka namokatra Baiboly misy fonony malefaka nefa mahitsy tsara foana izy ireo.
Niato indray ny famokarana
Nasaina nanajanona ny famokarany sy nandefa ny tahiriny rehetra ireo fanontam-pirinty roa, tamin’ny Septambra 2012, ary nasaina niandry ny hamokarana an’ilay Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao nohavaozina. Nokasaina havoaka tamin’ny 5 Oktobra 2013 izy io, tamin’ny fivoriana isan-taona fanaon’ny fikambanana Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
Voarain’ireo fanontam-pirinty ilay Baiboly vaovao amin’ny endrika elektronika, ny zoma 9 Aogositra 2013. Natomboka ny pirinty ny ampitson’io. Ny 15 Aogositra izy ireo no nahavita Baiboly manontolo voalohany. Nifandimby niasa andro aman’alina ireo mpiasan’ny fanontam-pirinty tany Wallkill sy Japon, nandritra ny fito herinandro taorian’izay, mba hamokarana sy handefasana Baiboly 1 600 000 mahery. Afaka nahazo iray avy àry ny mpanatrika rehetra tamin’ilay fivoriana fanao isan-taona.
Tsara tarehy ilay Baiboly vaovao ary natao hateza. Mbola sarobidy kokoa anefa ny hafatra mamonjy aina raketiny. Nanoratra toy izao ny vehivavy iray avy any Etazonia, ny ampitson’ny nahazoany ny Baiboliny: “Afaka mahazo kokoa izay lazain’ny Baiboly aho izao, noho ilay fanontana vaovao.”
Jereo hoe inona no atao any amin’ny toerana fanaovanay pirinty any Japon mba hanomezana fahafaham-po an’ireo mila Baiboly.
Inona no votoatin’ny Baiboly?
Tatitra Momba ny Fivoriana Fanao Isan-taona—Oktobra 2013